चालक निदाउँदा बबरमहलमा भयानक दुर्घटना (५ तस्बिर)
काठमाडौं । बबरमहलमा बुधबार दिउँसो पौने २ बजे भयानक दुर्घटना भएको छ । गुडिरहेको कारको चालक निदाउँदा दुर्घटना भएको हो । बानेश्वरबाट माइतीघर तर्फ गइरहेको बा १० च ४३४३ नम्बरको कारको
गुराँसको राजधानी तीनजुरे (फोटोफिचर)
टुरुप संग्रौला काठमाडौं । यो ठाउँ हो वसन्तपुर, तीनजुरे मिल्के । तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङको सीमा । पर्यटकीय क्षेत्र तीनजुरे–मिल्के–जलजले । यहाँबाट मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न पाइन्छ । मेटिन्छ थकान,
कन्दरा छिचोल्दै शिवपुरीमा हाइकिङ
नारायण भण्डारी शिवपुरी पर्वत काठमाडौ उपत्यकाको उत्तरमा ठिङ्ग उभिएकाे छ । वनैवनले ढाकिएको पर्वत उपत्यकाको पर्यावरणका लागि भगवान शिव नै हो । वस्तीमा वाग्मती पठाएर शिवपुरीले काठमाडौ खाल्डोमा सृष्टिको सिर्जना सम्भव
हास्यो हिमाल, नाच्यो मन
बागलुङ बजारबाट देखिएको धवलागिरी हिमाल । तस्बिरः रामबहादुर थापा
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१० मा जमराको जुस बनाउँदै किशोरी लामिछाने । जमराको जुस पिउन दैनिक ६० ग्राहक किशोरीसम्म पुग्ने गरेका छन् । बिहान खाली पेटमा जमराको जुस पिउँदा विभिन्न रोग निको
लोकतन्त्र मेलाकाे राैनक (फोटो फिचर)
तस्बिर डा. विजयकुमार पौडेल काठमाडौं । बसन्तपुरमा बिहिबारदेखि शुरु तीनदिने लोकतन्त्र मेलाको आज दोस्रो दिन । नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास र महत्व दर्शाउने उद्देश्यका साथ मेलालार्इ तामझामपूर्ण तवरले सिंगारिएको छ । संघीय
संविधान दिवसमा रमाए राउटे(फोटो फिचर)
सुर्खेत । संविधान दिवस मुलुकभर फरक फरक शैलीमा मनाइएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायीश, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीदेखि कर्मचारीले संविधान दिवसप्रति खुशी हुनु र यसलाई हर्सोल्लाहका साथ मनमाउन स्वाभविक
कागजमा लाखौँको बाटो, पर्यटकलाई हिउँभिर (फोटोफिचर)
लोकेन्द्र प्रसाद जोशी दार्चुला । अपिहिमाल । ७ नम्बर प्रदेशको प्रतिष्ठा । आरोहणका लागि आकर्षक हिमाल । र, केही विदेशी पर्वतारोही अपि हिमाल अरोहणका लागि गए । तर आरोहणको बाटो
‘जिउला’ मासी कसरी जिऔँला ? (फोटोफिचर)
आशिषबहादुर सिंह बझाङ । हिमाली जिल्ला बझाङ पाखा पर्वतले भरिए पनि यहाँ प्रशस्त धान फल्ने फाँट छन् । स्थानीय भाषामा ‘जिउला’ भनिने यस्ता फाँटको संख्या एकसय भन्दा बढी रहेको जिल्ला
दुईसय किलोको कागलाई पुजा(फोटो फिचर)
विष्णु थापा काठमाडौं । भाद्र शुक्ल अष्टमी अर्थात आज कागेश्वरी महादेवको पूजाआजा गरेमा कागबाट हुने अनिष्टबाट बच्न सकिने धार्मिक मान्यता । गोसाइकुण्ड र पाँच पोखरी मेला भरेर आउने श्रद्धालुले ल्याएको